मजदूरहरुको दुखेसो–रोगभन्दा भोक सहन गाह्रो ! – Upahar Khabar
मजदूरहरुको दुखेसो–रोगभन्दा भोक सहन गाह्रो !
प्रकाशित मिति : १ बैशाख २०७७, सोमबार १५:३० April 13, 2020
काठमाडौं – अघिसम्म सिन्धुलीका हरि माझीलाई दिन बितेको पत्तो हुँदैनथ्यो । दिनभर भारी बोक्यो, साँझ खाना खायो थुपुक्क सुत्यो । एकै निद्रामा बिहान झिसमिस भइहाल्थ्यो । जुरुक्क उठेपछि भारी बोक्ने काम शुरु हुन्थ्यो । यसरी बित्थे माझीका दिनहरु । दैनिक गुजाराका लागि भारी बोकेर उपत्यकामा भौँतारिएको धेरै वर्ष भइसक्यो तर उहाँलाई अहिलेको जस्तो सकस पहिले कहिल्यै परेको थिएन । “दिनदिनैको बन्दले केही गर्न पाएको छैन । आज २० दिन भयो दुई चार पैसा कमाइ पनि छैन । विकल्प नै केही नभएपछि के गर्नु भोकभोकै बस्नुपरिरहेको छ”, भक्तपुर थिमिस्थित शङ्खधर चोकमा भेटिनुभएका माझीले मलिन स्वरमा दुःख पाेखे ।
माझी थोत्रो ज्याकेट र पाइन्ट, धेरै दिन नुहाउन नपाएर जिङ्रिङ परेको कपाल, मुखमा कालो मास्क र फाट्न लागेको चप्पलमा देखिए । उनका अरु मजदूर साथीहरु पनि सडकपेटीमा सुस्ताउँदै थिए । माझीले हामीलाई व्यथा पोख्न भ्याए । समस्या सबैको उही न हो, बीचबीचमा उनीहरु पनि थप्दै थिए । कसरी दिन काट्ने होला भन्ने नै थियो सबैको साझा चिन्ता । सकड खाली नै थियो । एकै छिनमा मानवसेवा आश्रमको गाडी हुँइकिएर आयो । माझीलगायत उनका मजदूरहरु साथीहरु र सडक पेटीमा बसिरहेका अरुको अनुहार उज्यालो भयो । सबै खुशी देखिए । लकडाउनको शुरुआतमा भोगभोकै परेका मजदूरहरुलाई केही दिनदेखि त्यही गाडीले खाना ल्याएर खुवाउने रहेछ । यसो हेर्दैगर्दा उनीहरु बसेकै सडकपेटीमा खाना आइपुग्थ्यो । आश्रमले यसरी नियमित खाना खुवाउन थालेदेखि उनीहरुको मुहारमा चमक देखिन थालेको रहेछ जुन आज पनि झल्कियो ।
“केही दिन भयो यसैगरी खाना बाँड्न ल्याउनुहुन्छ, खायो बस्यो, बेलुका पाटीमा गयो सुत्यो, यसरी चल्दैछन् हिजोआजका दिन”, माझीले सुनाए । शुरुका दिनहरुमा भोकभोकै पर्यौँ उनले भने। कतिदिन त एक छाक खान पायौँ अनि धेरै दिन भोकै रहेको पीडा भुल्न नसकेको भन्दै अब त्यस्ता दिन नआएहुन्थ्यो भन्दै हुनुहुन्छ । पछिल्ला केही दिन खान त पाएका छन् तर उनीहरुको मनले मानेको छैन । उनीहरु काम गर्न चाहन्छन् । तर पाएका छैनन् । सरकारसँग रासन माग्न पनि गएकै हो, तर मजदुरले पाएनन् । “सिफारिस लिएर गएको हो खोइ साहुहरुलाई दियो, हामीलाई दिएन” खाना खुवाउने आश्रमलाई धन्यवाद दिँदै माझीले थप्नुभयो, “हजुर रोग लागेर त केही हुँदैनथ्यो भोक सहन सकिँदैन जस्तो लाग्नथाल्यो ।” उहाँले रोग लागेर पनि सबै जना मर्दैनन् भनेर आफूले सुनेको बताउनुहुन्छ ।
नजिकै रहेका अन्य सहकर्मीहरु भाइकाजी खत्री, रामबहादुर वाइवा, बाबुराम गुरुङ, प्रेम धिमाल, पूर्ण लामा सडकपेटीमै बसेर धमाधम खाना खाँदै हुनुहुन्छ । खाना खानुअघि आश्रमले नै स्यानिटाइजरको व्यवस्था गरेको थियो । सामाजिक दूरी कायम गरेर खाना खुवाइएको थियो । बेखर्ची भएर सडकमै बस्न बाध्य उहाँहरु धेरैजसोको काम भारी बोक्ने नै हो । नुवाकोटका पूर्ण लामाको कथा केही फरक छ । उहाँ जात्रा हेर्न चैत ९ गते उपत्यका भित्रिनुभएको रहेछ । तर बन्दाबन्दीले निस्कनै पाउनुभएन । चैत १० मा भेटघाट सकेर ११ गते फर्कने सोच थियो उहाँको । तर १० गते साँझ सरकारले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोक्न मुलुकमा अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर निस्किन नपाउने बन्दाबन्दी ‘लकडाउन’ को आदेश जारी गर्यो । राति मात्रै थाहा पाएका लामा उपत्यकामा अलपत्र पर्नुभयो । साथमा रहेको पैसा पनि केही दिनमा सकियो, खाना खान भौतारिनुप¥यो । अहिले कहिले पेटभर त कहिले आधी पेटमा दैनिकी चल्दैछ ।
विगत पाँच दिनदेखि भने पेटभर खान पाएको उहाँले सुनाउनुभयो । काठमाडौँको कोटेश्वरमा एक सानो खाजा पसलमा कुक काम गर्ने रामेछापका वीरबहादुर खड्का पनि आफू कहिल्यै अभावमा परेको मान्छे नभए पनि यतिखेरको जस्तो समस्या कहिल्यै सामना गर्नु नपरेको बताउनुहुन्छ । लकडाउनलाई अघिपछिको बन्दजस्तै होला भन्ने ठानेका उहाँ मुलुक नै सुनसान बन्द भएपछि छक्क पर्नुभएको छ । मासिक रु १६ हजार तलब खाने खड्का अहिले बेखर्ची भएपछि सडकमै हुनुहुन्छ । घर जान सकिने अवस्था रहेन । सरकारले राहत पनि दिएन । “राहत दिन्छ रे भनेर नागरिकता लिएर गएको दिएन”, खड्काले दुःख पोख्नुभयो, “त्यही सडकमा डुल्ने, खाने, ठेला र प्रतिक्षालयमा सुत्ने अवस्थामा छु, दिन काट्नै प¥यो के गर्नु ?” उहाँलाई शुरुमा कोटेश्वरमा एउटा युवा क्लबले खाना दिन्थ्यो । अहिले सो आश्रमले खाना दिन थालेपछि भने सजिलो भएको सुनाउनुभयो । खाना खुवाउन आइतबार साँझ मध्यपुरथिमि नगपालिकाका उपप्रमुख अञ्जनादेवी मधिकर्मी सरिक हुनुभएको थियो ।
घरमा असहायको संरक्षण गरी सडक मानव र पशुपक्षीको सहयोग गर्दै आएको संस्थाले लकडाउनका बेला आफ्नो नगरपालिकामा आएर भोकाएका मजदूरलाई खाना खुवाएकामा उपप्रमुख मधिकर्मीले आश्रमको प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले पकाउने चुलो नभएकालाई चामल दिँदा बेचेर खाने अवस्था रहेको भन्दै खानादिनु नै उत्तम विकल्प हो भन्नुभयो । चीनको वुहानमा गत डिसेम्बर ३१ मा शुरु भई विश्वव्यापी महामारीको रुप लिँदै गएको कोभिड–१९ को सङ्क्रमण विश्वका २१३ देशमा फैलिइसकेको छ । उक्त रोगबाट आजसम्म १८ लाख ५३ हजार १५५ नागरिक सङ्क्रमणमा परेका छन् । एक लाख १४ हजारले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
नेपालमा १२ जनामा यो सङ्क्रमण देखिए पनि फैलिएको भने छैन । यहाँ रोगको सङ्क्रमण नफैलिए पनि अप्रत्यक्षरुपमा देशभरका मानिस प्रभावित भएका छन् । कैयौँ भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्था देखिएकाले सरकारी निर्णयअनुसार स्थानीय तहबाट राहत वितरण जारी छ । पकाएर खाने ठाउँ नहुँदा मजदुरलाई राहत आकाशको फल झैँ हुन्छ । राहत पाउनेमा पनि सम्पन्नको बाहुल्यता देखिने गरेको गुनासो गरिब मजदूरको छ । त्यसैले मजदूरलाई दैनिक खाना खुवाउनु नै प्रभावकारी ठानिएको छ । नेपालमा यसरी भोकै सडकमा पुगेकालाई विभिन्न संस्थाले राहत र खान खुवाउँदै आएको छ । यो क्रम उपत्यकामा पनि जारी छ । वितरण प्रभावकारी नहुँदा अझै कतिपय मजदूर भोकभोकै बस्नु परेको छ भने भोकभोकै पैदलै गाउँ फर्कन पनि कतिपय बाध्य छन् ।
भक्तपुरका विभिन्न ठाउँमा मानवसेवा आश्रम र नेपाल स्वयंसेवक सङ्घका प्रतिनिधि मिलेर अहिले भोकै रहेका मजदूरलाई खोजीखोजी खाना खुवाउन थालिएको हो । सङ्घका अध्यक्ष सन्तोष निरौलाका अनुसार शुरुका दिनमा सडकमा भएका कुकुरलाई खाना खुवाउन थालिएको थियो । सोही क्रममा सडकमा मजदूर भोकै बसेको फेला प¥यो । “दुई÷तीन दिनदेखि खान नपाएको उनीहरुको दुखेसो सुन्यौँ, अब केही त गर्र्नै प¥यो भनेर आश्रममा खबर ग¥यौँ, अनि सबैको सल्लाहमा अभियान थालेका हौँ”, निरौलाले अभियानको बारेमा जानकारी दिनुभयो । स्वयंसेवकले भोकाएका मजदूर कहाँकहाँ छन् भनेर खोजी गर्छन् । त्यसपछि मानवसेवा आश्रमले आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर स्थानीय तहको समन्वयमा खान पकाएर वितरण गर्दै आएको छ । खानामा भात, दाल, तरकारी, सलाद दिने गरिएको छ । आश्रमले विगत सात वर्षदेखि मुलुकलाई नै असहाय सडक मानवमुक्त बनाउने अठोटका साथ सडकमा मागेरसमेत खान नसक्ने, वेसहारा, मनोरोगीको उद्धार गरी संरक्षणको अभियान चलाउँदै आएको छ । लकडाउनको अहिलेको समयमा आश्रमले दोहोरो अभिभारा ग्रहण गरेको छ । असहायको संरक्षणसँगै भक्तपुरका सडकमा भोको रहेका व्यक्तिलाई खाना खुवाउन थालेको छ । अन्य जिल्लामा आवश्यक सहयोग, समन्वय र सडक मानवको उद्धार गरिरहेको छ । आश्रममै खाना तयार हुन्छ र गाडीमा बोकेर जहाँजहाँ भोका मानिस छन्, त्यहीँ पुगेर खाना खुवाउने गरिएको छ । यतिबेला कोभिड– १९ को डरले गर्दा खाना खुवाउने क्रममा पनि सामाजिक दूरी कायम गरिन्छ । व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रयोग गरेर आश्रमका अभियानकर्मीहरु खाना दिन जान्छन् ।
हिजोआज दैनिक करिब ३०० जनालाई बिहान बेलुकाको खाना खुवाइने गरिएको छ । आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीले चैत २४ गतेदेखि नियमित खाना खुवाउने गरिएको बताउनुभयो । उद्धार गर्ने अभियानसँगै विभिन्न परिस्थितिमा सकडमा रहेका मजदूरको अवस्था कमजोर देखिएकाले आश्रमको इच्छा कटौती गरेर खाना खुवाउन थालिएको अधिकारी बताउनुहुन्छ । सात प्रदेशका १४ जिल्लाका १९ शाखाबाट आश्रमले बेसहारालाई सेवा दिइरहेको छ । यसरी बेसहारा र सडकबाट उद्धार गरिएकामध्ये अहिले एक हजार १०० जना संरक्षणमा छन् भने ६०० बढीलाई परिवारमा मिलन गराइसकिएको जनाइएको छ ।। (रासस, नारायण ढुङ्गानाको आलेखबाट)-NTV
एक वर्षको पारिश्रमिक नलिने राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठको घोषणा
सशष्त्रको कोरोना उपचार अस्पताल बन्दै
माओवादीको पालिका सम्मेलन सम्पन्न, आइतबारसम्म नेतृत्व चयन हुने
रुपन्देहीमा ट्रकको ठक्करबाट बाबु–छोराको मृत्यु
पोखराबाट १ लाख ९४ हजार २ सय अमेरिकी डलर सहित पक्राउ
बाघको जस्तो देखिने दाँत र श्रोत नखुलेको नगद सहित पक्राउ
नेपाली काँग्रेस दार्चुलाको मतगणना स्थलमा बोहरा र धामी पक्षबीच झडप, ४ जना घाइते
नेपाली काँग्रेस दार्चुलाको मतगणना स्थलमा दुइ पक्षबीच झडप हुदा आधा दर्जन घाइते, जिल्ला अस्पतालमा उपचार हुँदै
हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेर्पाको महाधिवशेन प्रतिनिधिमा उम्मेदवारी, पार्टीको शीर निहुराउने काम नगर्ने प्रतिबद्धता
नेपाली काँग्रेस दार्चुलाको मत गणना जारी, ४०० मत गणना हुदा सभापतिमा बोहराको अग्रता कायमै, सचिवमा कार्की
विवाह गर्ने भन्दै १५ वर्षीया किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा एक युवक पक्राउ
दार्चुला काँग्रेसको प्रदेश सभा (ख) को मतगणना सुरु
माओवादी पार्टी अझै सुदृढ र क्रान्तिकारी बन्ने अभियानमा : मन्त्री भुसाल
स्याङ्जा सुन्तला सुपरजोनको क्षेत्र विस्तार